ညီလင်းသစ်: ဆောင်းရဲ့ညချမ်း၊ အလွမ်းမှတ်တိုင် နှစ်ချို့ဝိုင်
Posted by ညီလင်းသစ် au 10.2.11
ကင်မရာကိုတော့ ခလုပ်နှိတ်တာပဲတတ်လို့ အခုလိုလေးတွေရေးတော့ နည်းနည်းသဘောပေါက်လာတယ်။
la photo de votre femme et votre fils endormi sur le canapé, ça doit être très belle aussi!!!
ဒီတစ်ခါတော့ ၀ိုင်ပဲသောက်ချင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်း)
ဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျ၊ အဲဒါကြောင့် "A picture is worth 100 talks" လို့ ပြောကြတာ ဖြစ်မယ်..။
ပုံနှစ်ပုံကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တာ လန်းတယ်ဗျို့...၊း)
အခုလို ကြားရတာလည်း ဝမ်းသာရပါကြောင်း...၊ ကျနော်သိသလောက် ထဲကပေါ့၊ Sharing is caring လို့ ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား....နော့။
Justement, mon idée au début était de poster cette photo. Ensuite, j'ai pensé qu'elle ne serait peut-être pas très contente quand elle la voit et j'ai laissé tomber. :)
ဝိုင်သောက်တာ အသက်ရှည်တယ်ဗျ၊ အဲဒီအကြောင်း သေချာ သုတေသနလုပ်ထားကြတာ ရှိတယ်၊ အဲ.. တနေ့ တစ်ခွက်ပဲ သောက်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်၊ :D
ဘာရှိတုန်းး) စကားမစပ် ဒီဘလောဂ့်က
ပုံတွေ အကုန်ကြိုက်၏။ သားသားလေး
နှုတ်ခမ်းက ချစ်စရာလေး နီထွေးနေတာပဲး)
ဟာ.. ဒါ အကင်းပဲ ရှိသေးတာ၊ အများကြီး ကျန်သေးတယ်၊ ဟားဟား..အလကား နောက်တာပါဗျာ၊ သူသူကိုယ်ကိုယ် ဒီလိုပါပဲ..၊
ယှဉ်ရင်တော့ဒုတိယပုံကိုပိုကြိုက်ပါတယ်... သိပ်အသက်ဝင်တယ်... ဗုံသံတွေတောင် ကြားလာသလိုပဲ.. ကျွန်တော်ကတော့ အခုမှ ကကြီးမှာတောင် ချွေးပြန်နေတုန်း..း)
ဓာတ်ပုံလေးတွေလည်း လှသလို အတွေးလေးလည်း လှတယ် အကိုညီလင်းသစ်။ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ရင်း မွေးရပ်မြေရဲ့ ဆောင်းရာသီကို လွမ်းမိတယ်။ ဒီမှာတော့ ဘာရာသီဥတုမှ မရှိလို့ ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ခံစားချက်လေးတွေတောင် ပျောက်ကုန်ပြီ ထင်ပါရဲ့ .. ။
စကားလုံးတွေပဲ ထွက်ပြေးတာဆိုရင်တော့ တော်သေး တာပေါ့ဗျာ..။း)
ပြန်ပေါ်လာတာ ဝမ်းသာတယ်ဗျို့..၊ သတိတရနဲ့ လာလည်တာ ထပ်ဆင့်ဝမ်းသာပါတယ်..။း)
ပန်းချီကောင်းရင် ဓါတ်ပုံလိုဘဲ၊ ဓါတ်ပုံကောင်းရင် ပန်းချီလိုဘဲတဲ့။
ပုံလေးတွေက ပန်းချီလေးလိုဘဲ၊နော်။ (ဒါဆိုသဘောပေါက်နော)
I like both n my hubby likes the bright one.
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ချီးကျူးစကားလေးပါပဲ၊ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ၊
Your hubby has the same idea as mine. Thanks to him as well!